“Way adag tahay in markale aan ku guuldareysano koobka Champions League” – Jordan Henderson – Gool FM
(Yurub) 26 Maajo 2019. Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ka hadlay kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonan dhigooda Tottenham Hotspur Sabtida soo aadan garoonka Wanda Metropolitano.
Finalka tartanka Champions League ay Liverpool ciyaari doonto Sabtida soo aadan ayaa noqon doono kii labaad ee xiriir ah, kaddib markii ay sanadkii hore guuldaro 3-1 ah kala kulmeen kooxda Real Madrid.
Iyadoo uu ku sii dhawaanayo sanadkiisii 29-aad ayuu kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson rajeenayaa inuu ku guuleysto koobka dhaga weyne ee Champions League, wuxuuna u noqon doonaa koobkiisii 2-aad uu kula guuleysto Reds, kaddib EFL Cup-ka ay ku guuleysteen 7 sano kahor.
Jordan Henderson ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” kahor kulanka finalka Champions League wuxuu ku sheegay:
“Sida iska cad waa arin aad u adag, run ahaantii way adag tahay”.
“Waan ogahay in dadku ay ii eegi doonaan qof ahaan, waxayna dhihi doonaan, wuxuu awoodi waayay inuu ku guuleysto tartanka Champions League, ama wuxuu gaari waayay finalka Koobka aduunka”.
“Laakiin aragtidayda way ka duwan tahay, arinta kuma xirna aniga oo kaliya, waxay ku xirnaan doontaa kooxdii soo ciyaartay, wax walba oo kubadda cagta ah ayaa ku saabsan kooxda oo dhan”.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa ku guuldareysatay xili ciyaareedkan inay ka qaado kooxda Manchester City horyaalka Premier League, waxayna Sky Blues ku qaaday farqi hal dhibac oo kaliya ah, iyagoo soo dagaalamay ilaa iyo ciyaarta ugu dambeysay ee horyaalka.
“Ma bedeli karno wixii ka dhacay Premier League, laakiin waan bedeli karnaa waxaan qabaneyno finalka Champions League”.
“Waxaan qabaa inaan dhamaanteen niyad jabnay maalmo yar, laakiin kubadda ayaa si dhaqso ah isbedeleysa, sidoo kale waxaa isbadalaya diirad saarida”.
“Ma jirto wax kaa dhigi kara inaad ka fiirsato finalka Champions League, tani waxay inoo tahay fursad weyn, waxaana dooneynaa inaan xilli ciyaareedkan kaga dhameysano ku guuleysiga tartankan”
“Way adag tahay in markale aan ku guuldareysano koobka Champions League” ayuu hadalkiisa ku soo xiray kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson